🥇 ▷ Huawei fulinta ayaa muujisay shaqo si loo helo barnaamijyada Android on Huawei Mate 30 ✅
Huawei fulinta ayaa muujisay shaqo si loo helo barnaamijyada Android on Huawei Mate 30
Qof walba wuxuu horeyba u xiiray inuu ogaado in Huawei Mate 30 casriga ah uu jiri doono la’aanteed Gmail, Khariidadaha Google, YouTube iyo barnaamijyada kale ee caanka ah markay fuulayso isbuucaan. Tani wax ku cusub qofna kuma ahan.
Laakiin maamulaha shirkadda Shiinaha ayaa sheegay inay weli jiri doonaan dariiqo lagu helo. Taasina waa war xiisa leh. Google ayaa bishii hore xaqiijisay in shirkadda labaad ee ugu weyn adduunka ee sameeya taleefannada casriga ah ay bilaabi doonto taleefanka gacmeedkeeda dambe iyada oo aan la adeegsanaynin codsiyadaas, iyadoo taasi ay ka dhalatay xayiraadda ganacsiga Mareykanka ee ka mamnuucaysa shirkadaha Mareykanka inay ganacsi la yeeshaan shirkadda Huawei.
La’aanta barnaamijyada Google ayaa sidoo kale macnaheedu yahay in Mate 30 uu dhoofin doono la’aantiis dukaanka Google Play. Tani waa meesha isticmaalayaasha Android badanaa ay kala soo baxaan barnaamijyo caan ah oo dhinac saddexaad ah sida Spotify, Uber iyo WhatsApp.
Madaxa fulinta ee Huawei Richard Yu ayaa sheegay inay jiri doonaan shaqo raadis taas oo ka dhigaysa “fududaan” ku filan milkiilayaasha taleefannada inay marin u helaan dhammaan barnaamijyada laga heli karo aaladda Android.
Isagoo la hadlayey wariyeyaasha ku sugan Berlin, Yu wuxuu raaciyay inay jiri doonaan “suurtagal badan” sababta oo ah asalka furan ee nidaamka hawlgalka moobaylka ee Android.
Inta badan adeegyada Google ayaa horeyba looga xannibay Shiinaha sababta oo ah faafreebka internetka ee adag, taas oo macnaheedu yahay in Huawei ay adeegsan karto nooca Ingiriisiga ah ee dukaanada dukaanka xafiiltanka ku dhisan ee laga sameeyay waddanka Huawei.
Tusaale waxaa ah soosaaraha barnaamijyada softiweerka Shiinaha ee Meizu, kaas oo dukaanka appkiisa uu siinayo dadka isticmaala awood ay ku soo dejistaan ​​barnaamijyada iyo adeegyada Google.
Fursad kasta oo aad dooratid dukaan app duuban, dhab ahaantii waa shirkad Mareykan ah. In ka badan 130 codsi ayaa loo gudbiyay Waaxda Ganacsiga Mareykanka iyadoo la rajeynayo shirkado rajeynaya inay alaabada iyo adeegyada ka iibiyaan Huawei, laakiin wali lama helin.
Mamnuucidda la shaqeynta shirkadda Shiinaha ayaa timid kadib markii hay’adaha dowladda Mareykanka ay soo saareen walaac ah in aaladooda loo isticmaali karo aallad basaasnimo dowladda Shiinaha. Huawei ayaa si joogto ah u beenisay eedeymahaas, iyo dagaal ganacsi oo sii kordhaya oo u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ma uusan caawin.
Waagii hore, Huawei wuxuu si weyn ugu tiirsanaa shirkadaha Mareykanka, asal ahaan barnaamijyada loo adeegsado aaladaha lagu iibiyo suuqyada Mareykanka iyo Yurub. Yu wuxuu horay u sheegay in ay Huawei doorbidayso in ay sii wadato la shaqeynta shirkadaha Mareykanka sida Google sida loo dhisayo wax soo saarkooda.